အိမ်နဲ့ လုပ်ငန်းခွင်အတွက် ဘက်တီးရီးယားနဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်တွေရန်က (၂၄) နာရီကြာ ကာကွယ်ပေးနိုင်မယ့် ပိုးသတ်ဆေး ရှိနေပါပြီ - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
COVID-19 လောက် ဒီကမ္ဘာကြီးကို ကျွမ်းထိုးမှောက်ခုံဖြစ်သွားနိုင်တဲ့ ဗိုင်းရပ်စ် ရှိမယ်မထင်ပါဘူး။ ဒီကပ်ရောဂါကြီးက ကိုယ့်သူငယ်ချင်း၊ မိသားစုတွေနဲ့ ပြောဆိုနေထိုင်တာကအစ ဈေးဝယ်တာ၊ အလုပ်လုပ်တာ အဆုံး ဘယ်လိုနေရင် ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီး နေ့တိုင်း အစစ်ဆေးခံနေရသလိုပါပဲ။ အားလုံးသိတဲ့အတိုင်း COVID-19 ဆိုတာ အသက်ရှုလမ်းကြောင်းကနေတဆင့် ဒါမှမဟုတ် ကိုယ့်အနားမှာရှိတဲ့သူရဲ့ အသက်ရှုလမ်းကြောင်းကထွက်တဲ့ အမှုန်အမွှားတွေကတဆင့် အဓိက ကူးစက်တာပါ။ နောက်ထပ် ကူးစက်မှုအများဆုံး လမ်းကြောင်းကတော့ ဗိုင်းရပ်စ်တွေရှိနေတဲ့ မျက်နှာပြင်တွေကို ထိတွေ့ကိုင်တွယ်နေရတဲ့ လက်တွေကနေတဆင့်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
လက်ရှိအချိန်ဟာ ပျံ့နှံ့နေတဲ့ ဘက်တီးရီးယားနဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်တွေကို တိုက်ထုတ်ဖို့ အရင်ကထက် အများကြီး သတိထားဖို့ လိုအပ်နေတဲ့ အချိန်ပါ။ ကိုယ့်အိမ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အလုပ်၊ ကျောင်းနဲ့ အများပြည်သူ သွားလာနေတဲ့ နေရာတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ် လူတွေနဲ့ ထိတွေ့လိုက်တိုင်း ဗိုင်းရပ်စ်တွေက ဆတိုးပွားပြီး ပျံ့နှံ့နေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ရောဂါကူးစက်နိုင်ရခြေ လျှော့ချနိုင်ဖို့ဆိုရင် ကိုယ့်အိမ်မှာရှိတဲ့ မကြာခဏ ထိတွေ့ကိုင်တွယ်တတ်တဲ့ မျက်နှာပြင်တွေကို ပုံမှန် သန့်ရှင်းရေး လုပ်ပေးတာ၊ ပိုးသတ်ပေးတာဟာ အရေးကြီးတဲ့ အဆင့်တစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဗိုင်းရပ်စ်တွေဟာ သူတို့ကပ်နေတဲ့ မျက်နှာပြင်နဲ့ ပတ်ဝန်းကျင် အနေအထားအပေါ် မူတည်ပြီး နာရီအတော်ကြာ၊ တစ်ခါတလေ ရက်အတော်ကြာတဲ့အထိ ရှင်သန်နိုင်ပါတယ်။ တစ်အိမ်နဲ့ တစ်အိမ်တော့ တူမှာမဟုတ်ပေမဲ့ လူတွေနဲ့ အများဆုံး ထိတွေ့နေတတ်တဲ့ မျက်နှာပြင်တွေက တံခါးလက်ကိုင်၊ ထိုင်ခုံ၊ စားပွဲ၊ လက်တန်း၊ မီးခလုတ်၊ ကစားစရာအရုပ်၊ ရီမုတ်၊ အိမ်သာ၊ မီးဖိုချောင်နဲ့ ရေချိုးခန်း မျက်နှာပြင်တွေ အပါအဝင် တစ်ကိုယ်ရေသုံး နည်းပညာကိရိယာတွေဖြစ်တဲ့ မိုဘိုင်းဖုန်း၊ ကွန်ပျုတာ၊ တက်ဘလက်နဲ့ ဂိမ်းစက်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။
သင့်အိမ်ကို WizAct 24 နဲ့ (၂၄) နာရီကြာ တစ်နေ့လုံး ကာကွယ်ထားလိုက်ပါ
အထူးသဖြင့် အခုလို ကပ်ရောဂါတွေ ဖြစ်ပွားနေတဲ့ကာလမှာ ကိုယ့်ရဲ့ အိမ်၊ အလုပ်ခွင်နဲ့ ကလေးစာကြည့်စားပွဲတွေကို ပိုးမွှားတွေ ပျံ့နှံ့ကပ်ညှိမနေအောင် ကာကွယ်ဖို့နဲ့ ထိထိရောက်ရောက် ပိုးသတ်နိုင်ဖို့ သာမန်ပိုးသတ်ဆေးတွေ သုံးတာက တစ်နေ့တာလုံးအတွက် လုံလောက်တဲ့ ကာကွယ်မှု မရရှိနိုင်ပါဘူး။
ဒါဆို အိမ်မှာ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့နဲ့ ပိုးသတ်ဖို့ ဘယ်လို ပိုးသတ်ဆေးကို သုံးသင့်ပါလဲ? WizAct 24 ကို စမ်းသုံးကြည့်ပါ! WizAct 24 က နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ မျက်နှာပြင် ပိုးသတ်ဆေးဖြစ်ပြီး မကြာခဏ ထိတွေ့ဖြစ်တဲ့ မျက်နှာပြင်ပေါ်က ၉၉.၉% သော ဘက်တီးရီးယားနဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်တွေကို (၂၄) နာရီလုံးလုံး ပိုးသတ်ပြီး ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
ပြီးတော့ WizAct 24 က အခြားသာမန် ပိုးသတ်ဆေးတွေနဲ့ မတူပါဘူး။ မျက်နှာပြင်တစ်ခုပေါ်မှာ WizAct 24 ဖြန်းလိုက်မယ်ဆိုရင် ၉၉.၉% သော ဘက်တီးရီးယားနဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်တွေ ကင်းစင်သွားရုံသာမက ဒီပိုးသတ်နိုင်စွမ်းက အဲ့ဒီ့ မျက်နှာပြင်ပေါ်က ဆက်ပြီး ရှိနေမှာဖြစ်လို့ လူတွေဘယ်လောက်ပဲ ထပ်ပြီး ထိတွေ့ပါစေ (၂၄) နာရီလုံး ပိုးသတ်နိုင်တဲ့ မျက်နှာပြင်တစ်ခုအဖြစ် ဆက်ပြီး ရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီပိုးသတ်ဆေးကို မျက်နှာပြင်မှာ ကပ်ညှိနေတတ်တဲ့ ပိုးမွှားတွေကြောင့် ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ ကျန်းမာရေးအန္တရာယ်တွေကို ကာကွယ်တားဆီးနိုင်စေဖို့ ထုတ်လုပ်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ WizAct 24 ဟာ Actiguard ရဲ့ နည်းပညာဖြစ်တဲ့ Actizone အသုံးပြုပြီး ပိုးသတ်တဲ့ ကိုယ်ပိုင်နည်းစနစ်တစ်ခုကို အသုံးပြုထားတဲ့ ကမ္ဘာ့ပထမဦးဆုံး ပိုးသတ်ဆေးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ Actiguard နည်းပညာဆိုတာကတော့ US EPA RSS24 နဲ့ UK BSI PAS2424 တို့ရဲ့ ပိုးသတ်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်တွေအရ ပိုးသတ်ဆေး စံချိန်စံနှုန်းတွေနဲ့ ပြည့်မီမှုရှိပြီး ဘက်တီးရီးယားပိုးမွှားတွေကို (၂၄) နာရီကြာ နှိမ်နင်းပေးနိုင်တဲ့ နည်းပညာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
သုံးတဲ့နေရာမှာ သတိထားရမှာလေး ပြောပါရစေ! ကိုယ့်အိမ်အတွက် အကောင်းဆုံး ကာကွယ်မှုကို ရချင်တယ်ဆိုရင် မျက်နှာပြင်တစ်ခုမှာ WizAct 24 ဖြန်းပြီးရင် ဆေးတွေကို မသုတ်ပစ်ဘဲ ဒီအတိုင်း အခြောက်ခံပေးဖို့ အရေးကြီးတယ် ဆိုတာပါပဲ။
When should you start brushing your baby’s teeth? How to take care of children’s dental health?